Etazonia dia mety nanangana Fanafihana fampihorohoroana "voamarina" tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Baghdad
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Irak » Etazonia dia mety nanangana Fanafihana fampihorohoroana "nohamarinina" tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Baghdad
Etazonia dia mety nanangana Fanafihana fampihorohoroana "nohamarinina" tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Baghdad
Tamin'ny hetsika tsy nampoizina i Etazonia dia voapanga ho namono ny komandy zokiolona Qasim Soleimani sy ny komandin'ny milisy Irak Abu Mahdi Al-Muhandis tamin'ny alàlan'ny zotram-piaramanidina nitondra ny mpamily teo akaikin'ny faritra misy ny entana Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Baghdad. Izany dia Seranam-piaramanidina iraisampirenena lehibe indrindra any Iràka, miorina amin'ny tanàna manodidina ny 16 km andrefan'ny afovoan-tanànan'i Baghdad ao amin'ny Governemanta Baghdad. Io no toeram-ponenan'ny kaompaniam-pirenen'i Irak, Iraqi Airways.
Ny fanafihana koa dia nahafaty mpikambana roa hafa tao amin'ny milisy Irak ary olona roa nofaritana ho vahiny, araka ny filazan'ny manamboninahitra iray ao amin'ny komandin'ny Baghdad.
Ny filoha amerikana Donald Trump dia nibitsika saina amerikana iray tsy nisy hevitra:
Ny filoha amerikana Trump dia nibitsika ny sarin'ny sainam-pirenena amerikana ho valinteniny.
Iray amin'ireo mpikambana milisy hafa novonoina ny lehiben'ny fifandraisana amin'ny vondrona elo, ny Hery Fanentanana Malaza any Irak, Mohammed Ridha Jabri. Valo ny isan'ny olona maty.
Fotoana fohy taorian'ny fanafihana dia nilaza tamin'ny Reuters ireo tompon'andraikitra amerikana fa tsy fantatra anarana ny antony nanatanterahana ny fitokonana fa misy tanjona roa mifandraika amin'i Iran ao Baghdad. Nandà ny hanome antsipiriany bebe kokoa ireo tompon'andraikitra.
Iraniana Press TV nampiseho an'ity horonantsary ity:
Nilaza ny tompon'andraikitra fa ny fitokonana dia nahafaty an'i Abu Mahdi al-Muhandis, komandy lefitry ny milisy tohanan'ny Iran fantatra amin'ny anarana hoe Hery Manentana Malaza.
Farafahakeliny telo balafomanga no noroahina teny amin'ny seranam-piaramanidina, raha ny filazan'ny tompon'andraikitra misahana ny filaminana Irak.
Nidina teny akaikin'ny tobin'ny fiaramanidina ny balafomanga, nandoro fiara roa ary nandratra olona maro, hoy ny Security Media Cell, izay mamoaka vaovao momba ny fiarovana Irak.
Ny mpitondra tenin'ny hery fanentanana malaza any Iràka dia nanome tsiny an'i Etazonia. Ny praiminisitra Iraq Abdul Mahdi dia nilaza fa ny sekreteran'ny fiarovana amerikana Mark Esper dia niantso azy tokony ho antsasak'adiny talohan'ny nanafihan'ny Etazonia azy ny fikasan'i Etazonia hamely ny tobin'i Kataib Hezbollah. Nangataka tamin'i Esper izy mba hanafoana ny drafitra amerikanina.
Tsy mbola nandà na nandray ny andraikiny tamin'io fanafihana io ny manampahefana amerikana.
Tamin'ny vaovao tsy mbola voamarina tao amin'ny fotsiny: nisambotra sy nisambotra ireto manaraka ireto tany ivelany any Baghdad ny miaramila amerikana amerikana: Qais Khazali (Mpitarika an'i Asaib Ahl al-Haq) Hadi al-Amiri (Lehiben'ny Fikambanana Badr)
Voamarina avy amin'ny twitter ny fanamarinana amerikana: Tsy misy firenena na fikambanana mpampihorohoro tsy ho tompon'andraikitra amin'ny fanafihana ny olom-pirenentsika na ny masoivohontsika any ivelany. Tany amerikana ny masoivoho. Azonao ve ny antony anananay US Tafika an-dranomasina?
Mandritra izany fotoana izany, eo an-dalambe mankalaza ny fahafatesan'i Qasim Soleimani, mpitarika ny IRGC ny Irakiana.
Vaovao misimisy momba an'i Iràka amin'ny eTN
Ny Delhi Metro rafitra fitaterana haingana dia mandefa Wi-Fi maimaim-poana